Nickel bonde waxaa asal ahaan loo adeegsaday inuu ahaado mid kiciya falcelinta kala duwan ee jawiga ahydrogen. Waxaa loo isticmaalay fal-celin iyo kiciyaal falcelino badan. Faa'iidooyinka nikkel bonde badanaa waa adkaansho sare, waxtarka wanaagsan, xasilloonida kiimikada Iyo xasiloonida kuleylka sare, falsafadda dareeraha ah waxay leedahay xulasho wanaagsan iyo falcelin, waxay noqon kartaa mid aan qaali ahayn biraha hydrogenelectrode, unugga shidaalka koronto-dhaliyaha.
Caanaha molecular NI2B
Lambarka CAS 12619-90-8
Cufnaanta 7.39 g / cm3
Barta dhalaalida 1020 C
Isticmaala Nickel bonde waxaa asal ahaan loo adeegsaday inuu noqdo mid kiciya falcelinta foosha xun ee jawiga ahydrogen. Waxaa loo isticmaalay fal-celin iyo kiciyaal falcelino badan. Faa'iidooyinka nikkel nickel waa inta badan adkaanta sare, saamaynta goodcatalytic, xasiloonida kiimikada Iyo xasilloonida kuleylka sare, ee ku jirta dareeraha dareeraha ayaa leh xulasho iyo falcelin wanaagsan, waxay noqon kartaa biraha aan qiimaha lahayn ee hydrogenelectrode birta, unugga shidaalka koronto dhaliyaha.
Caanaha kiimikada Ni2B
Miisaanka maadada ee 69.52
Barta dhalaalida waa 1020 ℃
Cufnaanta qaraabada 7.3918
Si aad ah magnetic. Ku milma regia aqua iyo nitric acid. In kasta oo ay deggan tahay hawo qalalan, haddana waxay si dhaqso leh uga falcelisaa hawada qoyan, gaar ahaan joogitaanka CO2. Waxay ku falcelisaa gaaska koloriin inta lagu jiro gubashada. Marka lagu kululeeyo uumiga biyaha, nikkel nikaydhka iyo boric acid ayaa la samayn karaa.
Hore: Budada Magnesium Boride, MgB2
Xiga: Xafnium Boride Powder, HfB2
Nickel budada budada ah
Warshadaha budada Nickel boride
Warshadda budada Nickel boride
Soosaaraha budada Nickel boride
Soosaarayaasha budada Nickel boride
Nickel boride budada Qiimaha